Mogadishu Journal » 2018 » January » 28
Kheyre oo dalka dib ugu soo laabtay
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay ka dib markii uu magaalada Davos ee dalka Switzerland uga qayb galay kulanka Fagaaraha Dhaqaalaha Aduunka ee (WEF2018). Wafdiga Ra’iisalwasaare Xasai Cali Kheyre ayaa Garoonka...
Madaxweyne Farmaajo oo khubad ka hor jeediyay shirka midowga Africa
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad dhinacyo badan taabaneysa ka jeediyey Shir-Madaxeedkii 30-aad ee Midowga Afrika, oo maanta ka furmay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Madaxweynaha ayaa...
Madaxweynaha Kenya oo kudbadiisa shirka Addis Ababa diirada ku saaray dagaalka Al-shabaab
Mjournal :-Madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka codsaday hoggaamiyayaasha Afrika in ay bixiyaan maaliyad, maamul, iyo ciidan si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka dagaallama Geeska Afrika. Waxaa uu sidoo kale ka codsaday Madaxda Afrika...
As Kurdish fighters look to the US to help in the fight against Turkish troops in Manbij, some are accusing Washington of double standards after it did nothing to protect Afrin from “Turkish occupation.” “With the coalition, especially the US forces, we saw some doub...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo oo kusugan magaalada Addis-Ababa ee Dalka Itoobiya ayaa la kulmay Xoghayaha Guud Qaramada Midoobey Antonio gutters,iyagoo kawada hadlay arrimaha Soomaaliya. Antonio Gutters Xoghayaha Guud...
Xildhibaanada Jubbaland oo gudbiyay mooshin ka dhan ah Golaha Wasiirada
Mjournal :-Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland ayaa mooshin kalsooni kala laabasho ah ka gudbiyay Golaha Wasiirada maamulka Jubbaland, kaddib markii ay ku eedeeyeen waxqabad la’aan. Wararka laga helayo Kismaayo ayaa sheegaya in Xildhibaano gaaraya labaatameeyo ay gudbiyeen...
Dabley hubeysan oo caawa degmada Wanle-Weyn ku toogatay Maxamed Jacfar Axmed
Mjournal :-Kooxo hubeysan ayaa caawa fiidnimadii ku toogtay degmada Wanle-weyn ee gobolka Sh/hoose Kaaliyihii Maxkamada degmadaas sida ay sheegayaan wararka halkaas naga soo gaaraya. Maxamed Jacfar Axmed ayaa waxaa rasaas ku furay kooxo bastoolado ku hubeysan xili uu ku sugnaa...